Wakiilka Robert Lewandowski Oo Si Joogto Ah Xiriir Ula Leh Kooxda Barcelona'
HomeWararka CiyaarahaWakiilka Robert Lewandowski oo si joogto ah Xiriir ula leh Kooxda Barcelona’
Wakiilka Robert Lewandowski oo si joogto ah Xiriir ula leh Kooxda Barcelona’
April 7, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay si joogto ah ula xiriirto wakiilka Robert Lewandowski si ay ugu dhaqaaqdo suurtogalnimada in ay xagaaga u dhaqaaqdo weeraryahanka Bayern Munich .
33-sano jirkaan ayaa markale qaab ciyaareed heer sare ah kusoo bandhigay kooxdiisa Jarmalka xiliciyaareed kaan, isagoo u dhaliyay 45 gool, waxaana uu diiwaan geliyay afar caawin 39 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Qandaraaska Lewandowski ee Allianz Arena waxa uu dhacayaa June 2023, inkastoo, ay jiraan soo jeedin ah inuu raadsado inuu baxo inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Barcelona ayaa la rumeysan yahay inay ka go’an tahay inay xiddiga heerka caalami ee dalka Poland keento Camp Nou, sida laga soo xigtay Sport , kooxda reer Catalan ayaa xiriir joogto ah la leh wakiilkiisa Pini Zahavi .
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in kooxda La Liga ka dhisan ay laba kulan oo wanaagsan la yeelatay wakiilada Lewandowski si ay ugala hadlaan u wareegida kooxda suuqa soo socda.
Laacibka sagaalka jeer ku guuleystay Bundesliga ayaa lagu Xamanayaa inuu haatan yahay bartilmaameedka weerarka ee Barcelona, ​​isagoo ka sarreeya weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland .
Lewandowski ayaa sidoo kale lala xiriirinayay Manchester United ka hor suuqa xagaaga, laakiin waxaa la rumeysan yahay inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Spain marxaladan xirfadiisa ciyaareed